कोरोना भाइरसः शरीरमा अक्सिजन बढाउने भनिएका यी विधिहरू गलत छन् – Dullu Khabar
२७ बैशाख २०७८, सोमबार १५:५५
सुर्खेत । महामारीको घातक दोस्रो लहरसँग जुझ्दै गर्दा उपचारको आवश्यकता परेकाहरू हताश मनस्थितिमा औषधि वा उपचारका विभिन्न उपाय अपनाउँदै छन् । कतिपय अनलाइनमा भएका गलत र भ्रामक सूचनाका भर परेका छन् । शरीरमा अक्सिजनको मात्रा बढाउने घरेलु उपायका नाममा उनीहरू गलत उपचार अपनाएको बताइएको छ ।
के हुन त्यस्ता भ्रामक उपचार विधि?
नेबुलाइजरले अक्सिजन दिँदैन
एक चिकित्सकले अक्सिजन सिलिन्डरको साटो औषधिलाई मसिनो गरी छर्कन मिल्ने एक उपकरण नेबुलाइजरबाट अक्सिजन लिन सकिने भनेर गरेको दाबी सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको छ । फेसबुक, ट्विटर र ह्वाट्सएपमा फैलिएको सो पोस्टमा ती चिकित्सकले हिन्दीमा बोल्दै ’हाम्रो वातावरणमा प्रशस्त अक्सिजन रहेको र त्यसलाई नेबुलाइजरले दिन सक्ने’ भनेका छन् ।
उनले नाम लिएको राजधानी दिल्लीनजिकै रहेको अस्पतालले उनको भनाइ खण्डन गर्दै त्यस्तो भनाइका पछाडि कुनै प्रमाण वा वैज्ञानिक तथ्य नभएको बताएको छ ।
अरू मेडिकल विज्ञहरूले पनि त्यस्तो विधि अक्सिजन आपूर्ति गर्न प्रभावहीन हुने बताए । भाइरल भिडिओको स्क्रीनशट ती चिकित्सकले पछि अर्को भिडिओ जारी गर्दै आफ्नो सन्देश गलत बुझिएको भनेका छन् । नेबुलाइजरले अक्सिजन सिलिन्डर विस्थापन गर्न नसक्ने उनले बताएका छन् । तर उनको भाइरल भिडिओ अनलाइनमा अझै फैलिरहेको छ ।
यी जडीबुटीले पनि अक्सिजन बढाउँदैन
भारतका सामाजिक सञ्जालहरूमा अक्सिजन स्तर घटिरहेका जस्ता कोभिडका लक्षणसँग जुझ्न विभिन्न जडीबुटी तथा घरेलु उपायहरू सुझाइएका छन् । एउटा निकै फैलिएको पोस्टमा कपुर, ल्वाङ, ज्वानो तथा युक्लिप्टस तेलको मिश्रणले कोभिडका बेला अक्सिजन स्तर बनाइराख्न सघाउने सुझाव दिइएको छ । तर त्यसले कोरोनाभाइरस बिमारीलाई सघाउने कुनै प्रमाण छैन ।
घरेलु उपाय सुझाइएको भ्रामक भिडिओको स्क्रीनशट
भारतका एक आयुर्वेदिक चिकित्सकले उक्त मिश्रणबारे बताएको भिडिओ फेसबुकमा २३,००० पटक शेअर भएको छ । वास्तवमा कपुरको तेल छालाको क्रीम तथा मलममा प्रयोग हुन्छ। यसको आन्तरिक सेवन हानिकारक पनि हुनसक्छ । अमेरिकाको सेन्टर फर डिजीज कन्ट्रोल सीडिसीले कपुर गन्ध फोक्सोमा पुग्दा हानि गर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ ।
कागती पनि होइन
एक वरिष्ठ भारतीय राजनीतिज्ञ तथा व्यापारीले हालसालै नाकमा दुई थोपा कागतीको रस हाल्दा अक्सिजन स्याचुरेसन स्तर बढ्ने दाबी गरे । विजय शङ्केश्वरले आफूले सुझाव दिएपछि उनका कोभिड प्रभावित साथीहरूको अक्सिजन स्तर ’आधा घण्टामै ८८ प्रतिशतबाट ९६ प्रतिशत पुगेको’ बताए । उनले यो उपायमार्फत भारतको अक्सिजन अभावको समस्या ८० प्रतिशतले घट्ने दाबी गरे ।
नाकमा कागतीको रस हालेर अक्सिजन बढ्दैन तर यस्तो उपचारले अक्सिजन स्याचुरेसनमा कुनै प्रभाव पार्ने कुनै प्रमाण छैन ।
र, यो पनि कुनै जादुमय उपचार होइन
भारतका सबभन्दा प्रख्यात योग गुरु बाबा रामदेव न्यूज च्यानलहरूमा आइरहन्छन् र उनले आफ्नो यूट्युब च्यानलमार्फत पनि घरमै अक्सिजन स्तर बढाउने उपायहरू सुझाइरहन्छन् ।
भिडिओमा औँलामा अक्सिजन स्तर नाप्ने डिभाइस राखेका उनी भन्छन्, “देशभरि अक्सिजनबारे कोकोहोलो छ, तर म तपाईँलाई जादु देखाउँछु ।“ युट्युब च्यानलमा ३००,००० पटक हेरिएको उक्त भिडिओमा उनले श्वासप्रश्वासको कसरत गर्छन् ।
बाबा रामदेवको युट्युब च्यानल योगगुरुका सुझाव डब्लुएचओको सुझाव विपरीत छ । सास रोकेर बस्दा उनको रगतमा अक्सिजनको मात्रा सुरक्षित स्तरभन्दा तल खसेको देखिन्छ ।
त्यसपछि उनी भन्छन् ’२० सेकेन्डमा अक्सिजनको मात्रा तल झ¥यो, अब दुई पटक लामो सास फेर्नुहोस् र जीउमा प्रशस्त अक्सिजन लिनुहोस्, यो (वातावरणमा) प्रशस्त उपलब्ध छ ।’
योग गर्नु सामान्यतया स्वास्थ्यको निम्ति राम्रो मानिए पनि कोभिडजस्तो रोगका कारण अक्सिजनको मात्रा शरीरमा घटेको छ भने त्यसका निम्ति मेडिकल अक्सिजन नै प्रयोग गर्न विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सुझाव दिएको छ ।
“यदि अक्सिजनको स्तर न्यून छ, लामो समयदेखि न्यून छ, र यदि त्यसको उपचार गरिएन भने शरीरका कोषहरू आफसेआफ काम गर्न बन्द गर्न थाल्छन् । यस्तो बेलामा जीवनरक्षक उपचार भनेको मेडिकल अक्सिजन दिलाउनु नै हो,“ डब्लुएचओकी डा. ज्यानेट डियाजले भनिन् ।